असल र ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु….. कोही छ ? – Namaste Host
असल र ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु….. कोही छ ?
March 24, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on असल र ईमान्दार लोग्ने को खोजीमा छु….. कोही छ ?
घर भाडा तिर्नु नपर्नेभएकाले हामी दुई बूढाबूढीको कमाइले हामीलाई छेलोखेलो थियो । एक दिन श्रीमान्ले केके सुनेर आउनुभयो, अनायस नै राती इजरायलको कुरा निकाल्नुभयो । त्यो दिनदेखि त मेरा श्रीमान्ले सँधैँजसो केही न केही इजरायलका बारेमा नयाँ कुरा ल्याएर मलाई दिनहुँ जसो सुनाउने गर्न थाल्नुभयो । एक दिन मैले झर्को मान्दै भने, हामीलाई के काम इजरायलको गफ । न जाने गाउँको बाटै नसोध्नू ।
किन र तिमी पनि जाऊ न इजरायल ! अब त केटाकेटी पनि ठूला हुँदै गए, भोलि उनीहरूको उच्च शिक्षाका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । हाम्रो कमाइ तन्किने होइन, बरु म यहाँ केटाकेटी स्याहारेर बस्छु, तिमी जाऊ इजरायल र हाम्रो पनि आर्थिक हैसियत अलि उकासौँ । किन नजाने गाउँको बाटै नसोध्नू भन्छ्यौ । हामीले कहिले आफ्नो घर बनाउने ।
एजेन्सी । कक्षा ८ मा पढ्दै गरेका छोरा आफ्नै शिक्षिकासंग भागेपछि बाबुले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । १४ वर्ष उमेरका उनका छोरा २६ वर्षकी शिक्षिकासंग भागेपछि बाबुले उजुरी दिएका हुन् । घटना भारतको गुजरातको हो । गुजरातमा रहेको गान्धीनगरमा २६ वर्षीया शिक्षिका आठ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय विद्यार्थीका साथ भागेकी हुन् ।
विद्यालयमा रहँदा उनीहरु निकै निकट थिए । शिक्षकले थुप्रैपटक शिक्षिकालाई चेतावनी पनि दिएका थिए । विद्यार्थीका पिता सरकारी कर्मचारी हुन् र उनले प्रहरीसमक्ष शिक्षिकाका विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । शिक्षिकाले छोरालाई फकाएर आफूसँग लगेको उनको आरोप छ ।
शिक्षिका र विद्यार्थी शुक्रवार अपराह्न ४ बजेदेखि गायब भएपछि प्रहरीले उजुरी दिएका हुन् छन् । एक प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, शिक्षिका ती विद्यार्थीसँग बढी नै नजिकिएकी थिइन् र विद्यालयका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई चेतावनी समेत दिएका थिए । शिक्षिका आफ्ना किशोर विद्यार्थीसँग भाग्ने दुर्लभै घटना भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३६३ अन्तर्गत पोइल जाने कसूरमा कलोल प्रहरीसमक्ष उजुरी दर्ता गरिएको छ । उजुरीमा ती शिक्षिका कलोल शहरको दरबारी चालमा बस्ने उल्लेख छ ।
यस्तो पिडा कसैलाई नपरोस ! आमालाई गाउनिका’ला गरे , बाउ २० देखी ब्य’पत्ता ,छोरिहरुको अवस्था हेर्नुहोस(भिडियो)।
पिठ्युमा बच्चा बोकी मध्यरातमा चिया बेच्ने सृस्‍टिले बाँच्नकै लागि यस्तो सम्म गर्छिन | सलाम छ चेलीलाई ( पुरा भिडियो सहित )।
जब मन्दिरको ढोका नजिकै बसेको कुकुरले दर्शन गर्न आउने सबैलाई आशीर्वाद दिने र हात मिलाएको भिडियो एका एक भाईरल (भिडियो)
June 10, 2021 Bijay Lama
यी महिलाले आफ्नै बाथरुमको ऐनापछाडि भित्ताको प्वालबाट हेर्दा जे देखिन (भिडियो)
May 11, 2021 May 11, 2021 Bijay Lama